संविधानलाई पूर्णता दिन बाँकी छ | रुपान्तरण
संविधानलाई पूर्णता दिन बाँकी छ
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार १८:३२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले भनेका छन, ‘नेपालको संविधान परिपूर्ण छैन । यसलाई पूर्णता दिन बाँकी नै छ । बर्तमान सरकारले त्यो आबश्यकतालाई संवोधन गरेको छैन ।’
नेपाल प्रेस युनियनको काठमाडौं शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै डा कोइरालाले भने, २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफनो सरकारले गरेका गल्तीमाथि औंला उठाउन आफैेंले पत्रकार तयार गरेर मासिक तीनसय खर्चदिने प्रबन्ध मिलाउनु भएको थियो । अहिले प्रम केपी ओलीले पत्रकारलाई सताउने र चिढाउने काम गर्दैछन ।
डा कोइरालाले पत्रकारहरुलाई हौस्याउँदै भने, अधिकारका लागि पत्रकारहरुले संघर्ष गर्नु पर्दछ । नागरिकहरुले अधिकार मांगेर होइन, खोसेर लिनु पर्दछ । सभामुख महरामाथि लागेको बलात्कारको आरोपलाई कांग्रेसका महामन्त्री शशांकले ‘संगीन’ बताए । उनले भने, ‘यो अभियोग के हो ? त्यसको तहमा पुगेर यस घटनाको निष्पक्ष छानवीन हुनु पर्दछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले तनहूँमा सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले रिसिंग गाउँपालिका भवनको शिलान्यास गर्ने सिलसिलामा त्यता जाने क्रममा आफनो यात्रामा कसरी अवरोध ल्याएका थिए ? त्यसको खुलाशा गरेका थिए । कार्यक्रममा जानु अघि नेकपाका कतिपय सांसदले आफूलाई त्यता नजान ‘सुझाव’ दिएको बताए । एमालेको संगठन र माओवादीको शैली बीच एकता भएपछि बनेको नेकपाले लोकतान्त्रिक अधिकार सीमितगर्न लागेको आरोप पनि डा रिजालले लगाए ।
सांसद रिजालले भने, ‘अहिलेको सरकार एक पार्टीको सरकार चाहन्छ । प्रम ओलीले पहिले आफना बिरोधीलाई लखेटन कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्ने सुझाव दिएका थिए । अहिले उनले बिरोधीलाई बाज बनेर झम्टिन्छौं भनेका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु मान्छेको मनमा भय (डर) रोप्न चाहन्छ । जनताले बुझेको छ उनीहरु कम्युनिष्ट शासनको निर्माणगर्न चाहन्छन ।’
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट देश बिकासमा लगाउन जंगलबाट ल्याएका थिए । अहिले त्यसको बिपरित प्रचण्ड नै आपराधिक मानिसको संगठनमा लागेका छन । देशमा संघीयताप्रति बितृष्णा जगाउने काम गरेकोछ सरकारले । पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई जसरी संचालित गरेकोछ त्यो लोकतान्त्रिक मान्यताको बिपरित छ’ डा रिजालको भनाइ थियो ।
डा. रिजालले भने, नेपाली कांग्रेसका युवा साथीहरुले संबिधानले दिएका अधिकारको प्रतिरक्षाका लागि सत्याग्रहीका रुपमा उभिनु पर्दछ । सत्याग्रह नै शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई जोगाउने अमोघ अस्त्र हो । कांग्रेस सामान्य नेपाली जनताको समर्थनमा मात्रै अघि बढन सक्छ ।
समारोहमा आफना बिचार राख्दै युवा नेता उदय शमशेर राणाले ओलीको सरकार अधिनायकवादतिर लागेको बताए । उनले भने, सरकारले सदन मार्फत जस्ता ऐन ल्याउन खोजेका छन ती गलत छन । ल्याउनुपर्ने ऐनको पत्तो छैन । संघीयता सम्बन्धी कानून तर्जुमागर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन । ऐन र नियमको अभावमा स्थानीय तहमा अप्ठेरोछ ।
राणाको भनाइ थियो, प्रतिपक्षप्रति नेकपाको असहिष्णु व्यवहार कुन हदसम्म गिरेको छ त्यो सांसद मीनेन्द्र रिजालप्रति तनहूँमा गरेको ब्यबहारले नै स्पष्ट गरेकोछ । नेता रिजालले तीन घण्टासम्म लडेर, खटेर, पर्खेर व्यवधान हटाउनु भयो र काम पूरागर्नु भयो । हामी सबैले यसरी नै व्यवधान हटाएर अगाडि बढनु पर्दछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा नेता अर्जुन नरसिंह केसीले, नेकपाका लागि संविधान ‘बाँदरको हातको खेलौना भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेता दीपक खड्काले ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए । फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालको कार्यपत्रबाट शुरु भएको कार्यक्रममा हरिहर बिरही, रमेश तूफान, कवीर राणा लगायत दर्जन पत्रकारहरुले आफना बिचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
तारानाथ दाहालले कार्यपत्रमा बताएका छन : संविधान जारी भएपछि नागरिक अधिकार संकुचनमा पर्छ भनेर हामीले पहिले नै भनेका हौं । तर, हाम्रो कुरा कसैले सुनेन । यो संबिधानले हामीलाई निर्देशित समाजतिर लैजान्छ ।